Noraran'i Torkia ny sidina mivantana avy any Bangladesh, Brezila, Afrika Atsimo, India, Nepal ary Sri Lanka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafanina ao Bangladesh » Noraran'i Torkia ny sidina mivantana avy any Bangladesh, Brezila, Afrika Atsimo, India, Nepal ary Sri Lanka
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafanina ao Bangladesh • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Ny Minisiteran'ny Atitany any Torkia dia namoaka boribory milaza fa nampiato ny sidina avy any Bangladesh, Brezila, Afrika Atsimo, India, Nepal, ary Sri Lanka hatramin'ny 1 Jolay ary mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Ny firenena sasany dia naneho fiakarana farany noho ny fiovaovan'ny virus COVID-19 vaovao.
Tapa-kevitra ny hanidy ny sisintaniny i Torkia amin'izay fidirana mivantana ao anatin'izany amin'ny alàlan'ny tany, rivotra, ranomasina na lalamby avy amin'ny firenena enina.
Ireo mpitsangatsangana tonga any Torkia avy any an-tany hafa taorian'ny nahatongavany tany amin'ny iray amin'ireo firenena ireo dia tsy maintsy omena valim-panadinana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny 72 ora lasa izay.
Nanambara ny manampahefana Tiorka fa mampiato ny sidina mivantana avy amin'ny firenena enina i Torkia noho ny fiovaovan'ny fiovan'ny virus virus COVID-19 any amin'ireo fanjakana ireo.
Nanamarika ny minisitera fa ny fizotran'ilay valanaretina tany amin'ny firenena sasany dia nampiseho fiakarana farany noho ny fiovaovan'ny virus COVID-19 vaovao.
Manaraka ny tolo-kevitry ny Ministeran'ny Fahasalamana, vorontsiloza Nanapa-kevitra ny hanidy ny sisin-taniny amin'izay fidirana mivantana ao anatin'izany ny alàlan'ny tany, rivotra, ranomasina na lalamby avy amin'ireo firenena ireo.
Ireo mpitsangatsangana tonga any Torkia avy any an-tany hafa taorian'ny nahatongavany tany amin'ny iray amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro farany dia tsy maintsy asiana valim-panadinana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny 72 ora lasa izay.
Hotsahana koa izy ireo amin'ny toerana izay tendren'ny governora eo an-toerana mandritra ny 14 andro, ary amin'ny farany izany dia mbola mila fitiliana ratsy indray.
Raha misy valin'ny fitsapana tsara dia hipetraka hatrany ny marary, ary hiafara amin'ny vokatra ratsy ao anatin'ny 14 andro manaraka.
Nanampy ny boriborin'ity minisitera ity fa ny mpandeha tonga any Torkia avy any UK, Iran, Egypt, ary Singapore dia tsy maintsy manana valim-panadinana COVID-19 ratsy hita tao anatin'ny telo andro lasa.
Ho an'ireo mpandeha tonga any Torkia avy amin'ny firenena hafa ankoatr'i Bangladesh, Brezila, Afrika atsimo, India, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, UK, Iran, Egypt ary Singapore, ireo izay afaka manome antontan-taratasy mampiseho ny fitantanana COVID-19 vaksinina tao anatin'ny 14 andro farany na fanarenana ny aretina COVID-19 tao anatin'ny enim-bolana lasa izay dia tsy hotakiana amin'ny valim-panadinana na hatokana ho karana.
Ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy natao nandritra ny 72 ora talohan'ny nahatongavany tany Torkia na ny fitsapana antigen haingana dia ratsy natao nandritra ny 48 ora aorian'ny fahatongavan'izy ireo dia ampy ho an'ireo izay tsy manome ny antontan-taratasy.